အက်တက်စီ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » အက်တက်စီ
Ecstasy ကို အခြားဘယ်လိုတွေခေါ်သေးလဲ
Generic Name: အက်တက်စီ Brand Name(s): အက်တက်စီ.
စိတ်ကြွဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Ecstasy ကို ၁၉၂၁ ခုနှစ်က Merck ဆေးဝါးကုမ္ပဏီက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MDMA လို့သိကြပါတယ်။ ဒီဆေးကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်က အမေရိကန်စစ်တပ်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုတွေမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေမတိုင်မချင်း MDMA ကို ပါတီတွေမှာ အသုံးပြုတာမျိုးမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ MDMA ကို စိတ်ပျော်စေတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးအနေနဲ့ တော်တေ်ာလေးကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ စနေ၊တနင်္ဂနွေပိတ်ရက် ပါတီပွဲတွေတိုင်းမှာ အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်အထိ MDMA ကို တရားဝင်ရောင်းချခွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာတော့ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်တာကြောင့် MDMA ရောင်းချမှုကို တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ Ecstasy ကိုဆေးပြားအနေနဲ့ တွေ့ရများပြီး ထိုးဆေးအနေနဲ့ ထုတ်ထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
Beans. လို့လည်း အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါသေးတယ်။
အရာရာတိုင်းက တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ။ Ecstasy ကစိတ်ကြွဆေးဆိုပေမယ့် စနစ်တကျအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုတာတွေရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် Ecstasy ကဘယ်လိုအကျိုးပြုပေးလဲဆိုတာကို ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။
စိတ်ကိုပျော်ရွှင်ပြီး လန်းဆန်းနေစေပါတယ်။ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး လူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေပြေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Ecstasy ကလူမှုဆက်ဆံရေးအပြုအမူတွေမှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အောက်ဆီတိုစင်ပမာဏကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) ကိုသက်သာစေနိုင်ခြင်း
MDMA ကိုပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကျရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) ကိုကုသရာမှာ အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ MDMA က အဆိုပါ စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒီဆေးက PTSD ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် တွင်းကမူမမှန်မှုတွေကို သက်သာစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ စိတ်ရောဂါဝေဒနာတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ဆေးဝါးတစ်ခုပါ။
MDMA ကို ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ Schizophrenia တို့လိုမျိုး စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
MDMA က ပါကင်ဆန်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လက်မောင်းနဲ့ခြေထောက်ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားမှုကို မထိန်းချုပ်နိုင်တာ လိုမျိုး ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ Schizophrenia စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေကိုလည်း သက်သာလျော့ပါးစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
MDMA ကရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒီဆေးက neutrophil activity ကိုသက်သာစေနိုင်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်တဲ့ cytokine IL ပမာဏကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆစ်အမြစ်တွေနာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Ecstasy ကိုလိုအပ်တဲ့ ပမာဏက အလွန်အကျွံသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် နှလုံး၊ဦးနှောက်၊ အသည်း၊ကျောက်ကပ်တို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် အသက်သေဆုံးတာမျိုးအထိတောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြပေးမယ်နော်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဒီဇငျဘာ 13, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဒီဇငျဘာ 13, 2017
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာရေးစင်တာ, ကျန်းမာ​ရေး
ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတစ်ယောက် မူးယစ်ဆေးသုံးနေသလား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
Methamphetamine သုံးနေလား၊ ဒီအကျိုးဆက်တွေ သတိထား…